Backlink-ka: Qeexitaanka, Tilmaamaha, iyo Khataraha | Martech Zone
Backlink-ka: Qeexitaanka, Tilmaanta, iyo Khataraha
Axad, Sebtembar 20, 2015 Isniintii, September 21, 2015 Douglas Karr
Inan daacad ahaado, markaan maqlo qof ereyga xusaya backlink iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyad guud ayaan u janjeeraa. Waan sharxi doonaa sababta qoraalkan laakiin aan u doonayo inaan ku bilaabo taariikh qaar. Waqtiga qaarkood, makiinadaha wax lagu raadiyo waxay ahaan jireen tusayaal waaweyn oo markii hore la dhisay oo la dalbay sida buugga oo kale. Algorithm-ka Google's Pagerank wuxuu bedelay muuqaalka raadinta maxaa yeelay waxay u adeegsadeen xiriiriyeyaal miisaan culus.
Xiriiriyaha guud wuxuu u egyahay sidan:
Keyword ama Erey
Xidhiidh isku xidha oo ka imanaya hal domain ama subdomain illaa boggaaga ama cinwaan web gaar ah.
Tusaale: Laba goobood ayaa raba inay u kala sarreeyaan eray gaar ah. Haddii Site A uu lahaa 100 xiriiriye oo tilmaamaya iyada oo eraygaas muhiimka ah ee qoraalka gadaal gadaal u ah, iyo Site B uu lahaa 50 xiriiriye oo tilmaamaya, Site A ayaa ka sarreyn doona. Qaddarka dadka ee ka beddelaya makiinadaha raadinta, waxaad qiyaasi kartaa oo keliya wixii xigay ee dhacay. Warshad 5 bilyan oo doolar ka kooban ayaa qarxday oo hay’ado SEO ah oo aan la tirin karin ayaa furay dukaan. Bogagga internetka ee falanqeeyay xiriiriyeyaashu waxay bilaabeen inay goolal dhaliyaan, iyagoo siinaya xirfadlayaal mashiinka raadinta fure u ah aqoonsashada boggaga ugu habboon ee xiriiriyeyaasha si ay macaamiishooda uga helaan darajo wanaagsan.
Dabcan, dubbe ayaa u dhacay sida Google u sii daayay algorithm ka dib algorithm si loo joojiyo ciyaaraha qiimeynta ee wax soo saarka backlink. Waqti ka dib, Google xitaa waxay awood u yeelatay inay aqoonsato shirkadaha tacadiyada ugu badan ee backlink ah waxayna ku aaseen aaladaha raadinta. Mid ka mid ah tusaalooyinka aadka loo faafiyey wuxuu ahaa JC Penney, oo kiraystay hay'ad SEO ah oo ahayd abuurista backlinks si loo dhiso darajadooda.
Hada backlinks-ka waa la miisaamaa iyadoo lagu saleynayo ku-xirnaanta goobta isku-darka ereyga. Iyo soo saarida tan xiriiriyeyaal hadh leh oo ku yaal boggag aan maamul lahayn ayaa hadda dhaawici kara boggaaga halkii aad ka caawin lahayd. Nasiib darrose, wali waxaa jira xirfadlayaal Raadinta Mashiinka Raadinta iyo Hay'ado diiradda saaraya backlinks oo ah daawada lagu gaarayo macaamiishooda darajo wanaagsan.
Dhammaan backlinks-ku ma aha kuwo loo siman yahay
Backlinks waxay yeelan karaan magac kala duwan (summad, wax soo saar ama qof), goob, iyo erayga muhiimka ah ee la xiriira (ama isku darka). Iyo bogga isku xiraya sidoo kale wuxuu yeelan karaa xiriir u leh magaca, goobta ama erayga muhiimka ah. Haddii aad tahay shirkad xarunteedu tahay magaalo caanna ku ah magaaladaas (oo leh gadaal gadaal), waxaad ku kala sareyn kartaa magaaladaas laakiin kuwa kale ma noqon kartid. Haddii bartaadu ku habboon tahay magac sumcad, dabcan, waxaad u badan tahay inaad ka sarreyn doonto ereyada muhiimka ah ee lagu daray astaanta.
Markii aan falanqeyneyno qiimeynta raadinta iyo ereyada muhiimka ah ee la xiriira macaamiisheenna, waxaan inta badan baarnaa isku-darka calaamadaha-keyword-ka waxaanna diiradda saareynaa mowduucyada iyo goobaha si aan u aragno sida wanaagsan ee ay macaamiisheennu u sii kordhayaan joogitaankooda raadinta. Xaqiiqdii, ma noqon laheyd meel lagu gaaro in loo qaato in algorithms-yada raadinta ay yihiin goobo qiimeyn ah oo aan lahayn goob ama astaan… laakiin sababtoo ah meelihii dib loogula xiriiray iyaga ayaa leh xiriir iyo awood u leh noocyo gaar ah ama goob.
Dulucda sheekada: Beyond Backlink
Xitaa ma inay noqotaa inuu gadaal gadaal ka noqdo mar dambe? xigashooyinka waxaa laga yaabaa inay ku kordhayaan culeyskooda algorithms-ka mashiinka raadinta. Tixraac waa xusid erey gaar ah oo ku dhex jira maqaal ama xitaa muuqaal ama muuqaal. Tixraac waa qof gaar ah, meel ama shay. Haddii DK New Media waxaa lagu sheegay bog kale laakiin macnaha guud waa marketing, muxuu mishiin raadin u miisaami laayahay una kordhin lahaa darajooyinka maqaallada DK New Media la xiriira suuqgeynta.
Waxa kale oo jira macnaha guud ee nuxurka ku xidha isku xidhka. Miyuu bogga tilmaamaya cinwaankaaga ama cinwaanka websaydhku ku habboon yahay mawduuca aad rabto inaad ku darajooto? Bogga leh backlink-ka tilmaamaya boggaaga ama cinwaankaaga ma ku habboon yahay mawduuca? Si tan loo qiimeeyo, makiinadaha raadinta waa inay fiiriyaan wixii ka dambeeya qoraalka ku jira qoraalka barroosinka oo ay falanqeeyaan dhammaan waxyaabaha ku jira bogga iyo awoodda bogga.
Waxaan aaminsanahay in algorithms ay adeegsanayaan istiraatiijiyaddan.
Qoraa: Geeri ama Dhalasho
Dhowr sano ka hor, Google waxay sii deysay calaamadeyn u oggolaatay qorayaasha inay ku xiraan bogagga ay wax ku qoreen iyo waxyaabaha ay soo saareen dib ugu laabta magacooda iyo astaan ​​bulsheed. Tani waxay ahayd horumar qurxoon oo qurux badan maxaa yeelay waxaad dhisi kartaa taariikh qoraa oo aad ku maamuli kartaa awooddooda mowduucyo gaar ah. Kucelinta tobankii sano ee aan wax ka qorayay suuqgeynta, tusaale ahaan, waa wax aan macquul aheyn.
In kasta oo dad badani aaminsan yihiin in Google ay dishay qoraa, waxaan aaminsanahay inay dileen kaliya calaamadeynta. Waxaan u maleynayaa inay jirto fursad aad u wanaagsan oo Google si fudud u soo saartay algorithms-keeda si loo aqoonsado qorayaasha iyadoon calaamadeysneyn.
Waqtiga Shaqada Link
Si aan daacad u ahaado, waxaan ku farxay burburka warshadaha dib-u-xiriirinta. Waxay ahayd xilli lacag-lagu ciyaaro halkaasoo shirkadaha leh jeebadaha ugu qotada dheer ay kireysteen wakaaladaha SEO ee leh ilaha ugu badan si ay u soo saaraan backlinks. Intii aan ku adkeynay shaqada soo saarista baraha waaweyn iyo waxyaabaha cajiibka ah, waxaan daawanay sida qiimeynteenu hoos ugu dhacday waqti kadibna waxaan luminay qeyb muhiim ah oo ka mid ah taraafikadayada. Waxay ahayd inaan inbadan diirada saarno warbaahinta bulshada iyo dhiirrigelinta si aan hadalka uhesho.
Waxyaabaha tayada-hooseeya, faallooyinka faallooyinka, iyo ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan 'key key' ma aha kuwo wax ku ool ah Xeeladaha SEO - iyo sabab wanaagsan. Maaddaama algorithms-yada mashiinka raadinta ay noqdaan kuwo sii kordhaya, way fududahay in la ogaado (oo laga saaro) qorshooyinka isku xirka maareynta.
In ka badan sanadkii la soo dhaafay, our taraafikada mashiinka raadinta dabiiciga ah ayaa kor u kacday 115%! Ma ahayn dhammaan algorithms-ka. Waxaan dhisnay goob jawaab celin sare leh oo si fiican uga shaqeysa qalabka mobilada iyo kaniiniyada. Waxaan sidoo kale u rognay boggeena oo dhan goob amaan ah oo leh shahaado SSL ah. Laakiin sidoo kale waxaan waqti ku bixineynaa falanqaynta xogta raadinta oo ay weheliso aqoonsiga mowduucyada (sidan oo kale) ee dhagaystayaasheena ay xiiseynayaan.
Waxaan sii wadaa inaan usheego dadka in SEO-ga uu ahaan jiray dhibaato xaga xisaabta, laakiin hada waxaa dib loogu celiyay dhibaatada dadka. In kasta oo ay jiraan xeelado aasaasi ah si loo hubiyo in bartaadu tahay mid saaxiibtinimo u leh raadinta, xaqiiqadu waxay tahay in waxyaalaha waaweyni si fiican u safan yihiin (oo ka baxsan xannibaadda makiinadaha raadinta). Mawduuc weyn ayaa la helay oo lala wadaagay bulsho ahaan, ka dibna la xusay oo lala xiriiriyay bogagga ku habboon. Taasina waa gadaal sixir!
Tags: backlinkerdib u xiridbacklinksbarashadalinksPagerank algorithm
3 Casharrada Suuqgeeyayaasha Mawduucyada waa inay ka bartaan tafaariiqda
Shakhsiyeynta shaqsi ahaanta iswada